ZTE Blade V9: Qeexitaannada, Qiimaha iyo Siidaynta | Androidsis
Dhowr bilood ka hor ayaa macluumaadkii ugu horreeyay ee ku saabsan ZTE Blade V9 la dusiyay. Laakiin, waxay ahayd inaan sugno ilaa MWC 2018 uu bilaabay inuu ugu dambeyntii ogaado faahfaahinta buuxda ee taleefanka. Ugu dambeyntiina, maalintii ayaa timid. Sababtoo ah waxaan horey u ogaanay qeexitaanada buuxa ee ZTE Blade V9. Waxaan wajaheynaa qiimo aad u xiiso badan oo heer dhexe ah.
Calaamaduhu waxay u aadeen qaar ka mid ah astaamaha ugu wanaagsan ee suuqa ku jira sida 18: 9 soo bandhig, jir quraarad leh iyo laba kamaradood. In kasta oo taleefankan dhexdhexaadka ahi uu leeyahay waxyaabo badan oo na siiya. Waxbadan ayaan idinkugu sheegeynaa hoosta.
Waxaan marka hore kaaga tagaynaa warqadda farsamada ee qalabka oo dhameystiran. Sidan ayaad horeyba u ogtahay dhinacyada ugu muhiimsan ee taleefanku nagu siinayo.
Faahfaahinta farsamada ZTE Blade V9
Tusaale Blades V9
Screen 5.7 Inch FHD +
Gacaliye Snapdragon 450
Kaamirada gadaal 16 + 5 MP f / 1.8 lenses PDAF 6P
Xuduudaha kala duwan LTE WiFi NFC
Tilmaamo kale Akhriska Faraha
Batariga 3.200 Mah
Cabbirada X x 151.4 70.6 7.5 mm
Qiimaha Laga soo bilaabo 269 euro
ZTE waxay dooratay qalab aad ufiican oo leh Blade V9. Wax lagu soo muujiyey jirka muraayada ee sumaddu ugu isticmaashay telefoonka. Wax si gaar ah saameyn ugu leh qalabka. Gaar ahaan haddii aan aragno sida ay uga muuqato nalalka hoostiisa, iyadoo siineysa taleefanka taabasho aad u qurux badan. Marka shirkaddu waxay taxaddar gaar ah u yeelatay nashqadda taleefanka.
Waxaan sidoo kale awoodnay inaan aragno sida tan ZTE Blade V9 wuxuu il gaar ah ku hayaa isbeddellada. Tan iyo markii taleefanku ku biirayo laba ka mid ah kuwa ugu caansan bilihii la soo dhaafay. Dhinaca kale, shaashadda leh 18: 9 saamiga iyo looxyada khafiifka ah, iyo sidoo kale joogitaanka qol laba jibbaaran. Dhinacyada sii kordhaya ee muhiimka u ah bartanka dhexe. Marka waxay door door ah ka ciyaari karaan guushaada suuqa.
Sidoo kale, taleefanka ayaa suuqa ku garaacaya Android 8.1 Oreo oo ah nidaamka hawlgalka. Marka waxay kujirtaa magacyada sida Google iyo Nokia oo horeyba u isticmaalay nooca ugu dambeeyay ee nidaamka qalliinka. Horumar muhiim u ah shirkadda.
Telefoonka ayaa suuqa soo gali doona bishaan Maarso, inkasta oo taariikhda saxda ah aan la shaacin xilligan. Ku imaan doonaa midabbo badan (buluug, madow, dahab iyo cirro). Marka adeegsadayaashu waxay heli doonaan waxyaabo badan oo ay ka doortaan. Sidaad aragtay, waxaa jira laba nooc oo ah ZTE Blade V9. Qaabka keydka ee 3GB iyo 32GB ayaa lagu qiimeeyay 269 euro. Dhanka kale isagu qiimaha waa 299 euro loogu talagalay moodeelka leh 4GB RAM iyo 64GB.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » ZTE » ZTE Blade V9 durbaba waa rasmi, ogow qeexitaankiisa oo buuxa